एकतारे: दाह्रीका कुरा
खै के झोँक चल्यो, दाह्री काटी दिएँ ।
काट्नै पर्ने बाध्यता त थिएन, पाल्ने रहर पनि थिएन । हुन त पालेको हैन, नकाटेको मात्र थियो । काटिदिएँ ।
मायालुले बारम्बार भन्ने गर्छिन्, दाह्री काट्नुस् । 'पैले दाह्री नपाल्दा तपाइँ राम्रो देखिनु हुन्थ्यो, आजकाल त फोहोरी हुनु हुन्छ ।' अब उसलाइ मेरो पारा के थाहा, मान्छे त म सरसफाइ गर्ने हुँदै हैन । कुन दिन उसको आँखा र मन झुक्किएको थियो र मलाइ सफा देखिन्, खै?
भित्री मनको इच्छाले उनीलाइ रिझाउन दाह्री काटेको पनि हुनसक्छ, तर उनीसँग भेटघाट नभएको पनि धेरै भएको छ । आज दाह्री काटेर आजै भेट हुने सम्भावना पनि थिएन । तर जे होस्, यो अनुहार उसैका लागि मात्र पनि त हैन । मेरो चिल्लिएर राम्रो भएको अनुहार अरूलाइ पनि मनपर्न सक्छ नि त ।
हुन पनि त्यसै भयो । महिनौं पछि भेट्न आइपुगेकी साथीले भित्री मन देखि नै मुस्काउँदै भनि "सबिन, हेन्डसम देखिएको छौ है' । कार्यालयका अन्य साथीहरूले पनि त्यहि प्रतिक्रिया दिएको पाएँ । हुन त मान्छेले मुखमा प्रशंसा गरेर ढाडमा कुरा काट्ने हुन् । एकछिन, एकदिन यो कुरा बिर्सिनै मनलाग्यो ।
कार्यालयमा एकसुरले काम गर्दै थिएँ । एकजना महिला आउनू भयो । "सबिन सर कता हुनुहुन्छ?' उहाँको आवाजमा हतारो, डर, उत्सुकता मिसिएको थियो ।
मुसुक्क हाँस्दै भनेँ "म नै हुँ"
उहाँले पत्याउनु भएन "हैन होला तपाइँ त!"
ए बा हौ! ढोकामा नाम र पद लेखिएको छ, कोठामा अन्य कुनै कुर्सी छैन । मैले खुद आफ्नो आवाजमा "म नै हुँ" भनेको छु, तापनि नपत्याउने?
एकछिन पछि विचार आयो, यो सब अनुहारमा दाह्री नभएर हो । दाह्री फालेर चिल्लो गाला लिएर बसेको मान्छे म, फुच्चे देखिएँ । उहाँले पत्याउनै सक्नु भएन कि म नै त्यो कुर्सीमा बसेको जिम्मेवार अधिकारी हुँ । जे होस्, दोश्रो चोटी पक्का गरेपछि उहाँले म सबिन भन्ने कुरा पत्याउनु भयो ।
नयाँ हाकिम आउनू भएको छ । हिजो परिचयको क्रममा नाम र पद भनेँ । उहाँले अँ अँ भन्नु भयो । आज बिहानै भेट्न गएँ, उहाँले फेरि नाम र घर सोध्नु भयो । मैले नाम, थर, घर सहित पद पनि दोहोर्याएँ । उहाँले हेर्ने नजरियाले नै लाग्दै थियो, तिनले मलाइ फुच्चे देख्दैछन् ।
ओहो! मायालुलाइ खुशी पार्न काटेको दाह्रीले कति अप्ठेरो सिर्जना गर्दो रहेछ । मायालु त खुशी भइन् होला, यता अरू चैं नखुशी भए ।
यो संसारमा सबैलाइ खुशी पार्न नसकिने रहेछ । जे होस्, एेना हेर्दा चैं आफूलाइ खुबै राम्रो देखेको छु । म चैं खुशी छु । अब दुइचार हप्ता यो गालामा दाह्री पलाउन्न ।
Labels: Blog, Diary, गनथन, ब्लग
Suman October 30, 2018 at 9:51 PM
दाह्री नकाट्या हुन्थ्यो |
Sujan Paudel October 30, 2018 at 10:13 PM
मायालुले भेटिन भने अर्को चट्कन लाउने भईन् :P :D
Bhim Prasad Ghimire November 30, 2018 at 1:23 AM
दाह्री दुनियाँलाई भारी ! आफूलाई रहर लागेपनि पाल्न पाइन्न । मेरो जसरी हिउँ नफुलुञ्जेल पालेकै राम्रो । ;)
एक दिनः तीन घटना
घटना १ - दुर्घटना वा षडयन्त्र छिमेककी आन्टी एकाबिहानै घरमा आईपुगिन् । आमा चिया लिएर कोठामा पस्नु मात्र भएको थियो । मभने सुत्या जस्त...
नगरकोट पदयात्राः सहभागी टुइटेहरू
अनिल घिमिरे @aakarpost दिपेश कोइराला @addkali
चाहना उही रहन्छ ...
नाम जेसुकै दिए नाताको , भावना उही रहन्छ । पाउने नपाउने दैव खुशी, चाहना उहि रहन्छ ।। नचाहे पनि मेरो हाल बुझ्न, तिम्रो खुशी। तिमी सँगै रा...
मालपोतको खरदार (कथा)
एउटा सानो दुइ कोठे ढुंगाको भवनामा दुइवटा सरकारी कार्यालय र ती दुई कार्यालयका कुरूवा उनी र म । त्यही नाताले समय कटाउन हामी साथी हुनै पर्ने भय...
हजार चोट सहेर उ हाँसे जस्तो गर्छ आकाश पाताल बीचको हद नापे जस्तो गर्छ अचानोले खुकुरीलाई प्रेम त गर्न खोज्छ हरेक चोटमा ती गोदना खोपेे जस्...